महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील छौँ । : निरौला - खवर संजाल
महामारी नियन्त्रणमा संवेदनशील छौँ । : निरौला
- जेष्ठ ४, २०७८ मा प्रकाशित
लिलानाथ निरौला खोटाङस्थित रावाबेशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन । विश्वभर फैलिरहेको कोविड १९ को महामारीबाट उक्त गाउँपालिका पनि चोखो रहन पाएन । गाउँपालिका भित्र संक्रमितहरुको संख्या बढ्दो छ । आजमात्र गाउँपालिकाको वडा नं. १ कुभिण्डेमा १५ जना नयाँ संक्रमित थपिए । यससँगै गाउँपलिका क्षेत्रमा केही तनाव थपिएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष निरौलासँग खबर संजालले केही कुराकानी गरेको छ । :
यो भयानक महामारीलाई तपाईंहरुले कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
पछिल्लो समय हाम्रो गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसो त देशभर नै धेरै संख्यामा संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । आज मात्र आएको स्वाव परिक्षको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो वडा नं. १ कुभिण्डेमा थप १५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । हामीले सचेत हुन अनुरोध गर्दागर्दै बाहिर बाट गाउँपालिकामा मान्छे भित्रिएका र उनीहरु सुरक्षित रुपमा होम क्वारेन्टिनमा नबस्दा यो अवस्था सृजना भएको हो भन्ने निचोडमा हामी पुगेका छौँ । हामीले पटक पटक हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु मार्फत, स्वास्थ चौकी, सुरक्षा निकाय मार्फत हामीले सजग गराउँदा गराउँदै पनि यस्तो हुन गएको छ । यो सहित हाम्रो गाउँपालिका भरिमा २० जना कोरोना संक्रमितहरु पुगेका छन् अब उहाँहरुसँग सम्पर्क भएका मान्छेहरुको स्वाब परीक्षण हामी गर्नेछौँ ।
भेटिएका संक्रमितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
गाउँपालिकाभित्रका सबै संक्रमितहरुको अवस्था हालसम्म सामान्य नै छ । हिजो मात्र दुई जना संक्रमितहरुको अवस्था अलि खराब भएको भन्ने समाचार पाएपछि हामीले त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पुर्यायौँ, उनीहरुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा केही जटिल भए पनि स्वासप्रस्वासमा त्यस्तो समस्या भएको पाईएन । बाँकीको त अझ अवस्था सामान्य नै छ । हामीसँग ५ वटा अक्सिजन बेड छ, अप्ठ्यारो स्थिती आएमा तत्काललाई यसले समाधान गर्न सकिन्छ र अरु स्वास्थ्य सामग्री जुटाउने कामका लागि पनि हामीले पहल गरिराखेकै छौँ ।
यो महामारी नियन्त्रणका लागी तपाईंहरुको तयारी के छ ?
यसको नियन्त्रणको प्रमुख उपाय भनेको सावधानी अपनाउने नै हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ । संक्रमितहरु र अरु पनि अनावश्यक रुपमा बाहिर ननिस्किन हामीले अनुरोध गरेका छौँ, कुनै समस्या आउनासाथ स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जानकारी गराउने र त्यसको समाधान गर्ने काममा पनि हामी लागेका छौँ ।
यो बर्ष तपाईंहरुको राहत वितरणको कार्यक्रम छ कि छैन ?
हाम्रो गाउँपालिकाले अघिल्लो बर्ष जिल्ला बाहिर बसेर रोजगारी गुमाएका गाउँपालिकाबासीहरुलाई सहयोग गरेको थियो र यहीँ बस्नेहरु मध्येपनि समस्यामा परेकाहरुको पहिचान गरी राहत वितरण गरेको थियो । यसपाली हामीले राहत वितरणको कार्यक्रम त शुरु गरेका छैनौँ तर छलफल भने शुरु गरेका छौँ । अप्ठ्यारो स्थिती आएमा राहत वितरण गर्ने भनेर हाम्रो विपद् व्यवस्थापन समितीले निर्णय गरिसकेको छ । समस्यामा परेका जनसमुदायहरुलाई हामी सहयोग गर्ने तयारीमा छौँ ।
गाउँपालिकाको सेवाप्रवाह कसरी भईरहेको छ ?
यो महामारीमा हामीले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा प्रवाह बन्द गरेका छौँ । सबै वडा कार्यालय, विद्यालय आदि बन्द नै छन् । गाउँपालिकामा केही कर्मचारीहरुले उपस्थित भएर अत्यावश्यक सेवा भने प्रवाह गरिरहनुभएको छ ।
अन्त्यमा गाउँपालिकाबासीहरुमा के शन्देश प्रवाह गर्न चाहानुहुन्छ ?
सम्पूर्ण गाउँपालिकाबासी जनसमुदायहरुलाई सुरक्षित भएर रहन अनुरोध गर्दछु । गाउँपालिका र वडाहरुले यो महामारी नियन्त्रणका लागि केही निर्णय र आह्वानहरु गरेका छन् यी सबै निर्णयहरुलाई अक्षरस पालना गरी यो महामारीलाई परास्त गर्न अनुरोध गर्न चाहान्छु । बाहिर बाट कोही नआउन र आईहालेमा होम क्वारेन्टिनमा सुरक्षित भएर बस्न अनुरोध गर्दछु । तपाईंहरुलाई कुनै समस्या आइपरेमा त्यसको समाधानका लागी हामी तत्पर छौं र संसारले खेपिरहेको यो समस्यालाई सबै मिलेर समाधान गरौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहान्छु ।